ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုမည်သို့ဒီဇိုင်းဆွဲရမည်နည်း Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 14, 2009 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 24, 2016 Douglas Karr
စျေးကွက်သမားအများစုသည်မဟာဗျူဟာများကိုရယူရန်၊ ကြီးထွားရန်၊ ဖောက်သည်များကိုရယူပါ၊ ဖောက်သည်များတိုးပွားအောင်လုပ်ပါ။aတက်ရောက်ပြီးနောက် Webtrends ကွန်ဖရင့်ငါလည်းသိတယ် ဖောက်သည်ဟောင်းများကိုပြန်လည်ရယူခြင်းသည်မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ညီလာခံတက်ပြီးကတည်းကငါပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (သို့) ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်မျက်စိကျနေတယ်။ မကြာသေးခင်ကငါသတ်လိုက်တယ် ဘိုဂို ကြိုးမဲ့အကောင့်။ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးမည်သည့်ပါ ၀ င်သောလေဆိပ်ကိုမဆိုမျက်နှာပြင်ထိထိမိစေသည့်ထူးခြားသည့် iPhone application တစ်ခုရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ငါအကောင့်ကိုမပိတ်ခဲ့ဘူး။
အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အသွင်အပြင်များ၊ အပြင်အဆင်နှင့်စံနမူနာမကင်းသောဒီဇိုင်းများကိုသဘောကျမိသည်။ အီးမေးလ်၏အသွင်အပြင်တစ်ခုစီကိုဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးကောင်းစွာစီမံထားသည်။
အမှတ်တံဆိပ် - အီးမေးလ်သည်ခိုင်မာစွာတံဆိပ်တပ်ထားသဖြင့်ပို့သူနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။
ပြောဆိုမည့်အကြောင်းအရာ [Message] - အီးမေးလ်၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သောအလွန်ပြင်းထန်သောခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မလိုချင်လျှင်နောက်ထပ်ဖတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ပေးကမ်း - တစ် ဦး အကြောင်းကြားစာရှိပါတယ် အထူးကမ်းလှမ်းမှုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာတူးနိုင်ရန်အတွက်စာဖတ်သူ၏သိလိုစိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း။
အဘိုး - ကမ်းလှမ်းမှုကိုမဖော်ပြမီ Boingo သည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်လာသောအရာအားသင့်အားပထမ ဦး စွာအသိပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်အီးမေးလ်တစ်ခုလုံးကို PPS ဖြင့်နောက်ဆက်တွဲနောက်ဆက်တွဲအင်္ဂါရပ်များထပ်မံလိုက်နာသည်။
ကမ်းလှမ်းမှုကိုအသေးစိတ် - မက်ဆေ့ခ်ျ၏မိတ္တူ၌ပြင်းထန်စွာ bolded အမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုအသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာ - ၎င်းသတင်းကိုအမှန်တကယ်သမ္မတနှင့်စီအီးအိုမှလက်မှတ်ထိုးသည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်အား၎င်းတို့မည်မျှအရေးပါသည်ကိုဖော်ပြသည်။ သတင်းသည်ထိပ်ဆုံးမှလာသည်။ (ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခြကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။
စစ်တမ်း - မလုံလောက်? ဘိုဂင်ဂိုသည်အလွန်ဂရုစိုက်သဖြင့်သူတို့အဘယ်ကြောင့်သိလိုကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကမ်းလှမ်းချက်ကို အသုံးချ၍ မရပါက၎င်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းကြားလိုသည်ကိုသိလိုကြသည်။ သူတို့တီထွင်ခဲ့သောစစ်တမ်းသည်တိုတောင်းပြီးချိုမြိန်သည်။
ကျနော့်အမြင်အရဒီဟာအလွန်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲပြီးကွပ်ကဲတဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတခုဖြစ်တယ်။ ငါ့အကောင့်ကိုသက်တမ်းတိုးစေသလား။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးချရန်ကျွန်ုပ်မစွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကဒီစစ်တမ်းမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်သက်တမ်းမတိုးသင့်တာလဲလို့မေးတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ငါလမ်းပြန်ရောက်ရင်ငါ့ Boingo ဝန်ဆောင်မှုကိုထပ်တိုးမလား။ လုံးဝ!
15:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 25
ငါပုံမှန်အားဖြင့်တကယ် crappy အီးမေးလ်များကိုရ။ သို့သော်လည်းငါသည်ထိုသူတို့အကြောင်းဘလော့ဂ်! သငျသညျငါများသောအားဖြင့်ရ junk ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ဤမှတ်ချက်အတွက်ဝဘ်ပုံစံထဲမှာ link တစ်ခုထား၏။
16:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 08
17:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 05
ဒီမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ Outlook တွင်ရုပ်ပုံများကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ ဥပမာကျွန်ုပ်သည် promo-email တစ်ခုကိုရရှိသောအခါဒီဇိုင်းသည်ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးတွေ့ရသည့်အရာဖြစ်သည်။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်ငါအီးမေးလ်ကိုဖတ်ရှုဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ကျပန်းစာသားအက္ခရာအတော်များများကြည့်ပါ။ အီးမေးလ်နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသော၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အတိုများကိုပြုလုပ်ရန်ဖောက်သည်များ၏တုန့်ပြန်မှုများစွာရရှိသည်။
17:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 34
HTML အီးမေးလ်များတိုးတက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် ExactTarget မှာနှစ်အနည်းငယ်တုန်းကအလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက - HTML အီးမေးလ်တွေဟာချွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့စာရင်းဇယားတွေက ၈၅% + မွေးစားခြင်းပါ။ ထို့အပြင်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများသည် HTML ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင် rendering လုပ်ခြင်း (နှင့်ကြီးထွားလာခြင်း) ကိုပြုလုပ်သည်။ iPhone နှင့် Crackberry တို့သည် HTML အီးမေးလ်များကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်စွာကိုင်တွယ်ကြသည်။
HTML အီးမေးလ်ကပြန်လာတာက rendering ခြွင်းချက်တွေထက်အများကြီးပိုတယ်။